INAAD KA ILAALISO SARIIRAHA, FURSADAHA LOOGU TALAGALAY SUUNKA SARIIRAHA LEH GACMAHOODA - INFRASTRUCTURE
Iyada oo la ixtiraamo xitaa dhul yar oo dhul ah, waxaan rabaa in aan ku beero waxyaabo ku dul mari doona miro ama uun uun isha ku hay. Laakiin marar badan bannaanka iyo bannaanka u ma ka fikiraan wax badan oo ku saabsan design of sariiraha. Taasna waa sababta deyrka sariiraha looga samaysan yahay qalab aan habooneyn waxayna u muuqdaan kuwo aan la qabin. Laakiin haddii loo baahdo, xitaa iyadoo la adeegsanaayo waxyaabo asal ah, dhulka waxaa lagu samayn karaa si fiican oo qurux badan.
Waa maxay hawlaha xayndaabka beerta
Deedka kasta oo beerta ku yaal wuxuu leeyahay laba hawlood oo waaweyn: tayada iyo farsamada. Marka la eego, iyaga ayaa la aqoonsan karaa:
Magaciisa - Xulashada dhulka, waxay hoosta ka xariiqday asalka u ah inta ka hartay goobta. Dhismaha xayndaabku waa lagama maarmaan, maaddaama loo qoondeeyay xariiq khaas ah oo dhulka ku yaal ma laha "difaac" qiimaha.
Kala saarida - Waxay kuu ogolaaneysaa inaad kala qaybiso qaybo badan oo kala duwan. Sidaa awgeed, dhaqamada kala duwan ayaa wada noolaan kara iyada oo aan midba midka kale waxyeeleynin.
Ilaalinta - Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ilaaliso goobta iyo dhirta saamaynta dibadda ee kala duwan.
Naqshad - taas oo aad ka dhigi kartid xudduudaha sariiraha (qalabka dabiiciga ah ama asalka macmalka ah), waxay kuu ogolaaneysaa inaad si aad ah u naqshadeeysid goobta, isaga oo isku daraya hal gacan-macaan oo hal-dhis leh oo leh agab ku dhow.
Intaa ka dib si aad u ilaaliso sariiraha beeraha, dooro maaddada
In la abuuro sariiraha dabbaasha waxay ku haboon yihiin wax kasta oo la heli karo. Muuji fikrad yar oo adoo adeegsanaya lebbaad caadi ah ama xayeysiin ah waxaad abuuri kartaa halbeeg muuqaal ah oo muuqaal ah. Dabcan, wax waliba waxay leeyihiin sifooyin wanaagsan iyo mid xun. Ku dhowaad xayndaab kasta oo sariirood leh gacmahooda ayaa xitaa samayn kara beerta aan loo baahnayn, taasina waa la sii wadayaa.
Ma taqaanaa? Xayndaab bir ah oo la aaso ayaa u oggolaanaya sariiraha beeraha xitaa buuraha buuraha.
Diyaarinta xayawaanka, oo laga sameeyay alwaax dabiici ah, waa bay'ad ahaan nadiifiye marka la barbar dhigo qalabka dabiiciga ah. Laakiin isla mar ahaantaas, dhismayaasha dhirta ayaa qaali ah waxayna leeyihiin nolol aad u gaaban. Xiriir toos ah oo qoryo leh biyo iyo dhul qoyan ayaa saameyn xun ku yeesha. Sariiraha qoryaha ayaa si fudud u soo gaadhsiiya jeermiska bakteeriyada iyo dhaawaca fungal. Xitaa haddii aad haysato wakhti aad ku hirgelinayso qoryaha alwaaxda ka hor inta aanad ku rakibin, ma awoodi doonto inaad u ilaaliso muddada qalliinka oo dhan. Xayndaabka qoryaha ayaa lagu rinjiyeeyn karaa midab kasta, taas oo kuu oggolaan doonta inaad abuurto qaybo muuqaal ah. Haddii ay jiraan dhowr dhismo alwaax ah beerta, ka dibna naqshadooda qaab isku mid ah leh xayndaab alwaax ah ayaa si aad ah u kala jiidan doonta dhulka.
Ma taqaanaa? Elemsept "antiseptic", oo loo isticmaalo xitaa hirgelinta qulqulatada tareenada, waxay gacan ka geysan doontaa joojinta burburka qoryaha alwaax.
Maqaalkani waa mid aad u jecel beeraleyda, sidaas darteed sariiraha jiingada waxaa laga arki karaa beerta labaad oo dhan. Si aad u sameyso xayndaab, waxaad isticmaali kartaa qaybo gogol ah, ka dib marka uu dhamaado shaqada salka.
Dariishadda gawaarida waa sahlan tahay in la rakibo mana burburin karo biyaha, heerkulka hooseeya iyo roobabka. Gaadiidka marka la barbardhigo biraha ayaa aad u yaraa kuleylka marka la gaaro iftiinka qoraxda, taas oo yareyneysa halista gubashada dhirta. Labadaba ribbed iyo kabid guri oo loogu talagalay sariiraha beerta waxay kuu ogolaaneysaa inaad si quruxsan u qurxiso qaabka guud ee dhismaha beerta.
Waa muhiim! Asbestos wuxuu ku dhexjirnaa xayawaanku wuxuu saamayn xun ku yeelan karaa dhirta, sidaas darteed xayndaabka xayawaanka si joogto ah u hubso waxyeelada.
Diyaarinta birta waa mid xoogan oo ku filan si loo xakameeyo waxyeellada farsamada. Waxaa intaa dheer, waxay si sahlan u ilaaliyaan qaabka la bixiyay. Ku samee sariiraha caanka ah ee waddankooda adoo isticmaalaya gacmohoodu aad u fudud. Si aad tan u sameyso, qaado warqad bir ah oo aad jarjartey maqas gaar ah oo loogu talagalay biraha. Haddii aadan haysan xirfadaha aad ku shaqeyneysid biraha, ka dib marka hore u fiirso xaashi gaar ah oo bir ah.
Deedka birtu wuxuu shaqeyn doonaa dhowr sano. Laakiin waqti ka dib, waxaa saameeyn doona cadowga cabsida leh ee birta - miraha, taas oo ugu dambeyntii gebi ahaanba burburin doonto xayndaabka. Sidoo kale walxaha noocan oo kale ah ee sariiro dabaasha ah waxay leeyihiin xiriir joogta ah oo biyo ah, taas oo kaliya sii xumaynaysa xaaladda. Sidaa darteed, qalabaynta dayrarka birta, ka ilaali ilaalinta la isku halayn karo ee birta. Rinjiga waxyaabaha xayndaabka ah ee xayndaabkeedu yahay difaaca khaaska ah (fosforic acid) wuxuu kaa caawinayaa inuu hoos u dhigo faafitaanka miraha. Mid ka mid ah sifooyinka xun ee qiiqa birta ayaa ah awooda aad u kululeyso qorraxda.
Waa muhiim! On maalinta gaar ah xagaaga kulul, bowd bir birta waxay gaari kartaa heerkul ah 50 ° C. Sidaa darteed, hubi in dhirta aan la taaban dhinaca dhinaca deyrka.
Jilibku wuu dhammaadaa
Tuur - waa sidaad u deyn lahayd sariiraha waddanka, taas oo loo yaqaan "raqiis iyo farxad." Brick waa alaabta laga heli karo meel kasta, iyo in la dhiso xayndaab aan ka dhicin xitaa qof aan qofna diyaar u ahayn. Si aad u sameyso xayndaab hoose, uma baahnid cement and sand, dhammaan waxa loo baahan yahay tani waa leben iyo majarafad.
Wixii dhirta sii kordheysa, waxaad samaysan kartaa xayndaab dherer yar - sida xayndaabka noocan oo kale ah waa in uu ahaado mid isku dheelitiran oo leh dhir la mid ah. Kahor ilaalinta beerta ee dalka, waa lagama maarmaan in la qodo dabagal yar oo wareega wareegga. Kadibna waxaad dhigtaa lebbiska (vertically or tilted). Sidan oo kale, waxaad samayn kartaa sariir ku dhowaad qaab kasta. Diyaarinta lebenka sare si aad wax yar uga dhigto, sababtoo ah waxay u baahan tahay aasaas. Si tan loo sameeyo, barkad caarada leh oo dhumucdeedu tahay 20-30 sentimitir, waxaad u baahan tahay inaad ku shubtid cajalad taabasho ah oo leh qayb ka mid ah 20 x 20 sentimitir. Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa in lagu xoojiyo cajaladda bacda birta. Tani waxay abuurtaa saldhig adag oo qoto dheer oo qoto-dheer, kaas oo lebbiska la dhigo.
Waa muhiim! Xayndaabka lebiska sare waa qaab dhismeed asaasi ah oo aan meel kale loo guuri karin. Sidaa darteed, samaynta xayndaabka noocan ah, si adag u go'aami qaabkeeda iyo meesha.
Qoryaha caaga ah
Ilaa hadda, sariiraha kuraasta caaga ah waa kuwa ugu caansan ee loogu talagalay diyaarinta dhulka. Qoryaha caaggu waxay u adkaystaan ​​qoyaan xad dhaafka ah, kama baqayaan kallana, qaabkoodu iyo baaxaddooda ma baddalayaan xaaladaha cimilada. Bacaha ayaa leh miisaan hoose, taas oo si fudud u fududeyneysa gaadiidka.
Si loola shaqeeyo waxyaalahan uma baahna qalab gaar ah. Sidoo kale, si aad u abuurto xayndaab, waxaad isticmaali kartaa balaastiga loo isticmaalo, taas oo yareyneysa kharashyada. Bannaanka u khibrad leh oo og in sida loo sameeyo dayrarka caaggu soo saaro kali kali ah ee maaddadan. Waqti ka dib, albaabbada PVC waxay waayaan cufnaanta waxayna noqdaan huruud.
Ma taqaanaa? Diyaargarowga beerta si habboon u qalabaysan ayaa noqon doona caqabad aan la cayimin oo cawska ugu badan.
Sida loo sameeyo xayndaab beerta leh gacmahooda, talooyin iyo khiyaamo
Tiknoolajiyada abuurista dabbaraadyada sariiraha waa mid guud - waxaad u baahan tahay inaad diyaariso dhulka (heerka, calaamadee wareega sariirta), ka dibna diyaarso alaabta aad dooratay (giigsan, caag ah, iwm.) Dhinaca geesaha. Laakiin si aad u sameysid sariirta saxda ah, waa muhiim inaad raacdo talooyinka qaarkood:
Waa in aysan aheyn mid sareeya si aanay u dhicin dhirta bilowga koritaankooda. Heerka ugu sarreeya waa 10-30 sentimitir.
Samee iyaga si fiican - xoojin tooska iyo qaabka sariiraha.
Samee cufnaanta si looga hortago lakabka bacriminta in uu roobku marayo. Waxay sidoo kale u oggolaan doontaa in aysan ku faafin marka ay waraabinayaan dhirta.
Ha ilaawin waxyaabaha la yiraahdo. Dayradu waa inay ku haboonaato halbeegga guud ee muuqaalka ee degaanka magaalada.
Doorashada sida loo ilaaliyo sariiraha waddanka, waa mid ballaaran. Muuji fikradaha qaarkood, xitaa guddiyada caadiga ah iyo lebbiska ayaa soo bandhigi doona sawirkaaga.